विर्तामोडका जनप्रतिनिधिलाई एउटा सुझाव
By radiovision on	 July 18, 2017 अर्थ-वाणिज्य, प्रमुख समाचार, विचार-अन्तरवार्ता
२ नम्वर प्रदेश वाहेक मुलुकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । भरतपुर महानगरमा मत गणनामा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि के हुने भन्ने मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । त्यसको निर्णय आउन अझैं समय लाग्ने देखिएको छ । निर्वाचन भएका अन्य स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेका छन् । सर्वोच्चको हालको अवस्थाले मुद्धा गर्नु झन्झट व्यहोर्नु मात्र हो भन्ने देखिएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ढिलो न्याय दिनु र न्याय नै नदिनु उस्तै उस्तै हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । तर, आजको प्रशंग त्यो सँग सम्वन्धित होइन । म नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको शैलीबारे केही चर्चा गर्छु आगे जनप्रतिनिधिकै मर्जी ।
साउन १ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ । अहिले मध्य वर्षाको समय हो । किसानलाई कामको चटारो, व्यापारीलाई करको चटारो पर्ने समय हो यो । यो बीचमा मतदाता नामावली संकलन गर्दा पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा थामी नसक्नु भीड देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले आगामी निर्वाचनका लागि पनि जनप्रतिनिधि छान्न नागरिकमा उत्साह देखिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । टन्टलापुर घाममा पनि सर्वसाधारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घण्टौ लाइन वसेर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सक्रिय छन् । नागरिकको यो उत्साहलाई सलाम गर्नै पर्छ । हो यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ आज (मंगलबार) नै निर्वाचन आयोगले नै स्थानीय तहका केन्द्रबाट फोटो सहितको नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटा नागरिकको तर्फबाट आयोग निर्णयलाई स्वागत गर्छु ।
आजको एउटा परिस्थितिले यो लेख लेख्न मलाई बाध्य वनाएको छ । नखाउँ भने दिन भरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भनेझै परिस्थिति निर्माण भएको छ । र, म सोचिरहेछु, जनप्रतिनिधि के का लागि ? अब प्रशंगमा अगाडि बढौं । आज दिउँसो छिमेकी दिदी सीता राईले फोन गर्नुभो र भन्नुभो, भाइ म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आएको छु, भान्जी र छिकमेकी ४ जनाको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन । भान्जीको विर्तामोड नगरपालिकाको ४ नम्वर वडाबाट नै बनाएको नागरिकता हो उसको त नाम लेखिदिने रहेछ, तर, सँगै आएका सम्सेर आले मगर, अनिल आले मगर, शोभा मगर, पदमकुमारी मगरहरुको नागरिकता रामेछापको हो । सिफारिस चाहिने रहेछ । के गरौं । मैले एकछिन बस्तै गर्नोस भने । र, जनप्रतिनिधिको खोजीमा लागेँ । त्यो भन्दा पहिले कसले अहिले मतदाता नामावली दर्ता गर्ने सिफारिस गर्दै रहेछ भनेर एमाले झापाका नेता रोमनि भट्टराईलाई सोधेँ । उहाँले नगरपालिकाका मेयरलाई भनेको जानकारी दिनुभयो ।
म २०५१ सालदेखि विर्तामोडमा बसेको छु । त्यसको ४-५ वर्षपछि नै मैले पनि चिनेका छिमेकमा बसेका उनीहरुलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । अघिल्लो दिन बेलुका अर्थात् सोमबार बेलुका एमाले नेता रोमनि भट्टराई, वडा सदस्यहरु र विर्तामोड ४ का एमालेका अगुवा नेता कार्यकर्तासँग यो विषयमा कुरा भएको थियो । उहाँहरुले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो । मैले वडा सदस्य गंगा प्रसाईंलाई फोन गरेर विवरण बारे जानकारी गराएँ । उहाँले सिफरिसका लागि नागरिकताको फोटोकपीसहित सम्वन्धित मान्छे चाहिने बताउनुभयो । मैले उहाँलाई बुझाउन सकिन । प्रेस चौतारी झापाका पूर्व अध्यक्ष गोपाल काफे संयोगले नगरपालिकामै हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम र परिस्थिति बताएर मेयरसँग भेटेर सिफारिस बनाएर चन्द्रगढी पठाउन आग्रह गरेँ । उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, काम भएन । मैले बाध्य भएर सीता दिदीलाई फोन गरेँ र भने दिदी काम भएन फर्किनु होला । भोलि सिफारिस बनाएर काम गरौंला । उहाँले चन्द्रगढीबाट फर्किदाँ सिफारिस बनाएर नगरपालिकाबाट घर आउनु भयो । अब मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने तयारी छ ।
म झापाको विर्तामोडबाट प्रशारण भइरहेको रेडियो भिजनमा काम गर्छु । नेपाल पत्रकार महासंघको झापामा सचिव, अध्यक्ष हुँदै अहिले केन्द्रीय सदस्य र पूर्वाञ्चल संयोजक पनि छु । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गोपाल आचार्यलाई भनेर पनि नागरिकता भएपछि नामावलीमा नाम लेखिदिनु न भन्नेथिएँ । सायद मान्नु हुन्थ्यो होला । उहाँसँग चिजान राम्रै छ । तर, पत्रकारको नेता भएकाले अतिरिक्त कामका लागि उहाँलाई भन्दा दवाव होला भन्ने ठानें । बरु जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनताका काम उनीहरुले गर्छन् भन्ने विश्वासमा पर्दा नागरिकता भएका चारजना छिमेकीले टन्टलापुर घाममा दिनभर दुख पाए । अब त स्थानीय तहबाट नाम लेखिन्छ रे त्यति वेलाको चर्चा उसैवेला गरौंला ।
यो दिनभरको विवरणपछि जनप्रतिनिधिलाई मेरो एउटा सुझाव छ । तपाईहरु जनताको काम गर्न चुनिनु भएको हो । सबै जनता सबै विषयमा जन्ने भएका भए तपाईंहरुको आवश्यक्ता महसुस हुने थिएन । म जत्तिका नागरिकलाई जनप्रतिनिधिको आवश्यक्ता कमै पर्छ । मैले भनेका काम म न गए पनि कर्मचारीले फोनको भरमा गरिदिन्छन् गरेका छन् । किन कि यो १५ वर्षजति झापामा पत्रकारको नेता बन्दा किहिल्यै गलत काम गरेको छैन । विश्वास कमाएको छु । सीता राईहरुलाई नै जनप्रतिनिधिको बढी आवश्यक्ता हुन्छ । कानुन जानेका छैनन् । कानुनका ठेलीमा लेखेको पढेर गरिदिने काम विर्तामोडमा मेघराज बाँस्तोलाहरुले जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि गरेका थिए । आज पनि गर्दै छन् । गंगा प्रसाईजीहरुको आवश्यक्ता सहजीकरणका लागि हो ।
आज गंगाजीले विर्तामोड नगरपालिकाबाट एउटा कर्मचारी लिएर गएर विर्तामोडका सर्वसाधारणलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मै सिफारिस बनाई दिने गरेको भए के विग्रन्थ्यो ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय त टोली लिएर नागरिकता बाँढदै हिँड्छ । तपाईंहरु त झन जनप्रतिनिधि हो । अब नगरपालिकामै टोली आउला कम्तिमा २ जना सिफारिस बनाउन निवेदन लेख्ने मान्छे राखेर आएका नागरिकलाई नकुदाई काम गराएर पठाए हिजो मत दिएकाले ठिक गरेछौं भनेर गर्व गर्छन् । भोलि यस्तै मान्छे चाहिन्छ भनेर अरुले पनि भोट देलान । तर, यस्तो चाहिन्छ, उस्तो चाहिन्छ भनेर कानुन कै कुरा भनिदिने जनप्रतिनिधिको काम भयो भने तपाईंलाई भेट्नुभन्दा अघि नै मेघराजहरु छँदै थिए र छँदै छन् नि । साना कुरामा सहयोग चाहिन्छ, ठुला कुराको अपेक्षा गर्ने मतदाता तपाईंहरुकोमा आइपुग्दैनन्, मन्त्रीहरुले नै भ्याइदिन्छन्, उनीहरुका सिफारिस सिंहदरवारमै बन्छ । निवेदन लेख्न जान्ने वकिल उनीहरुका साथमा हुनछन् । निवेदन लेख्न जान्ने भएको भए सीता राईले पनि तपाईलाईं खोज्ने थिइनन् । लेख्न जान्दिनन् निवेदन तपाई जनप्रतिनिधिले लेखिदिए कति जाति हुन्थ्यो । कामको सुधार हुने अपेक्षासहित ।
Mohan Kazi on July 18, 2017 3:09 pm
पुरै पढेँ, मार्मिक लाग्यो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम र कर्तव्य नबिर्सन आग्रह गर्दछु ।